ခရီးသွားနေရာများ - ခရီးသွားသတင်းများ ခရီးသွားသတင်း
ရှာဖွေပါ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးခရီးသွားနေရာများ ကြိုတင်စီစဉ်ထားပါ။ ကမ္ဘာကြီးသည်မြင်တွေ့ထိုက်သောအံ့ဖွယ်ရာများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ကြာကြာမစောင့်ပါနှင့်ဤအပိုင်းတွင်သင်၏အားလပ်ရက်များအတွင်းတိတ်တဆိတ်ပျောက်ဆုံးသွားမည့်ထူးခြားဆန်းပြားသည့်ခရီးသွား dest ည့်သည်များနေရာကိုမရှာဖွေပါနှင့်။
ဘယ်နိုင်ငံကိုသွားလည်ချင်ပါသလဲ ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်မြို့တွင်သင်ရှုံးနိမ့်လိုသနည်း ဤတွင်သင့်တွင်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များ၊ အကောင်းဆုံးဓါတ်ပုံများနှင့်အကြံဥာဏ်များအားလုံးပါသောအဓိက ဦး တည်ရာများရှိသည် ကမ္ဘာကြီးကိုလှည့်လည်ပြီးမင်းရဲ့အားလပ်ရက်တွေ၊.
ဒီဆောင်းပါးမှာမေလကိုဘယ်သွားရမလည်းဆိုတာကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးနေရာ ၁၀ ခု။ အကြောင်းပြချက်ကအရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်။
por ခရီးသွားသတင်း လွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်း .
por Susana godoy လွန်ခဲ့တဲ့6လအတွင်း .
por မာရီယာ လွန်ခဲ့တဲ့ 8 လအတွင်း .
ဘူမိဗေဒသည်အလွန်ကြည့်ကောင်း။ ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဥပမာတစ်ခု ...
por Mariela Carril လွန်ခဲ့တဲ့9လအတွင်း .
တောင်တန်းများ၊ စိမ်းလန်းစိုပြေသောစိမ်းလန်းသောအပင်များ၊ ပင်လယ်ပြာများ၊ ကမ်းခြေများနှင့်နေရောင်ခြည်များ၊ မာကေးဆပ်ကျွန်းစုများအကြောင်းအကျဉ်းချုပ်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်လှပသောကျွန်းများစွာရှိပြီးကရစ်ဘီယံပင်လယ်သည်ပရဒိသုများစွာကိုစုစည်းထားသည်။ ဥပမာကျွန်းစုများ ...
por လူးဝစ် Martinez လွန်ခဲ့တဲ့ 12 လအတွင်း .
ဟီလ်ဗာရှိ Isla Canela သည် Iberian ကျွန်းဆွယ်၏အခွင့်ထူးခံဒေသတစ်ခုတွင်တည်ရှိသည်။ မြောက်ဘက်ခြမ်းတွင် ...
Stavanger, နော်ဝေတွင် ဦး တည်ရာ
por Mariela Carril လွန်ခဲ့တဲ့ 1 တစ်နှစ် .
နော်ဝေတွင်ရှေးအကျဆုံးသော site တစ်ခုမှာ Stavanger ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်မြို့တစ်မြို့နှင့်မြို့တော်စည်ပင်သည် ...
ရှေးဟောင်းနှင့်မတရားသောအင်ပါယာအကြွင်းအကျန်များကိုကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ဒါဟာကျွန်း၏ဖြစ်ရပ် ...
အဘယ်အရာကို Gran Canaria တွင်ကြည့်ရှုပါ
por မာရီယာ လွန်ခဲ့တဲ့ 1 တစ်နှစ် .
Gran Canaria သည်လူ ဦး ရေသိပ်သည်းမှုအမြင့်မားဆုံးကျွန်းဖြစ်ပြီးကျွန်းများမှသန်းပေါင်းများစွာရရှိသည်။
တောင်အမေရိကရေတံခွန် - စွဲမက်ဖွယ်ရေတံခွန်များ
Alpine Fauna: ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှတိရိစ္ဆာန်များ
Roman Colosseum ၏သမိုင်းနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများ
Mantos Paracas: Paracas ယဉ်ကျေးမှု၏အထည်အလိပ်အမွေအနှစ်